ဘယ်ခေတ်တွေ ရောက်ကုန်ပြီလဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဘယ်ခေတ်တွေ ရောက်ကုန်ပြီလဲ ?
ဘယ်ခေတ်တွေ ရောက်ကုန်ပြီလဲ ?
Posted by etone on Jul 23, 2012 in Critic, Short Story, Society & Lifestyle | 57 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း ကားေပၚက အတြဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက မြို့ထဲလမ်းလေးဆယ်မှတ်တိုင် ကနေ ၃၉ကားစီးရင်း ကြည့်မြင်တိုင်ဘက်ကိုပြန်တော့ ၊ နေ့ခင်းအချိန်ဖြစ်တာကြောင့် လူသိပ်မကြပ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒီလမ်းက သွားနေကြဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ထိုင်လျှင်နေပူမှာ စိုးလို့ ညာဘက်က လွတ်နေတဲ့ ထိုင်ခုံတစ်ခုမှာ ဝင်ထိုင်စီးခဲ့ပါတယ် ။
တစ်ယောက်တည်း တောင်ငေးမြောက်ငေးနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာ တွေးရင်းပေါ့ ။
မီးပွိုင့်အရောက်မှာတော့ ၊ ချက်ချင်းတန်းဝါသွားတဲ့အတွက် ကားက ဘရိတ်ဆောင့်အုပ်လိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်မနည်းတူ တခြားလူတွေလည်း ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ယိုင်ကုန်ကျတာပေါ့ ။ ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး မှောက်လျှက်လဲသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး အားလုံးနေရာကိုယ်စီရတာကြောင့်ပါ ။ ယိမ်းယိုင်သွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်မပျက် ပြန်လည် တည့်မတ်နေကြတုန်း … တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်သံထွက်လာပါတယ် …. ။ အသံလာရာကိုကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မရှေ့ခုံတန်းက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီက ထွက်လာတဲ့အသံပါ ။ ဘေးမှာလည်းကောင်လေးတစ်ယောက်ပါတာတွေ့ရတယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပူးကပ်နေတဲ့ သဏ္ဍန်အရ ၊ အတွဲတွေဆိုတာ သေချာပေါက်အတပ်ပြောလို့ ရပါတယ် ။ ကား ယိုင်သွားလို့ အသံထွက်လာတော့မှ သူတို့နှစ်ယောက်ကို သတိထားမိခဲ့တာပါ ။
တလမ်းလုံး အပြင်ကိုငေးရင်း ၊ ကားထဲကိုလည်း မျက်စိကစားရင်း … ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်မရောက်ခင်ထိ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ပေါ့လေ ။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းမြင်လာတာက ဟိုအရှေ့က နှစ်ယောက် ဂဏှာမငြိမ်တာပါပဲ ။ ပူးလိုက်ကပ်လိုက်ခွာလိုက်နဲ့ … ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ နှစ်ယောက်တည်းကမာ္ဘဖြစ်နေပုံပါ ။ သတိထားကြည့်မိမှပဲ ကြက်သီးထစရာ မြင်ကွင်းမျိုး ခဏခဏမြင်ရတော့ ၊ သူတို့ ခုံနောက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မလုံမလဲဖြစ်မိပါတယ် ။ သူများ အမြင်မှာ ခုံလွတ်တွေများပါလျှက် ဒီမိန်းမ ဒီအတွဲနောက်ထိုင်တာ ဘာမြင်ချင်လို့လဲဆိုတာမျိုး အထင်ခံရမှာစိုးလို့ မလုံမလဲဖြစ်မိတာပါ ။
မြင်ရတာ မောင်နဲ့နှမ ၊ သားအမိအတူကြည့်လို့ မသင့်တော်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆွေးမျိုးရင်းချာ ညီအစ်မ ၊ တူမလေးတွေဆို ဂုတ်ကနေဆွဲချပြီးရိုက်ပစ်ချင်စရာမြင်ကွင်းမျိုးပါ ။ သူတို့အနေထားက လူမြင်ကွင်းမှာ မသင့်တော်တာကတော့ အမှန်ပါ ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြမလို့ ၊ ဘေးကလူတွေကို အားနာသလိုလို စိတ်ဖြစ်မိတာကြောင့် လက်ရှောင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မပြောလို့ သူတို့ ဘယ်လို အနေထားနဲ့ ကားစီးကြသလဲ သိချင်ကြမှာပေါ့နော် ။ ဒီလိုပါ ….. ။ ကောင်လေးက ညာဘက် ပြတင်းပေါက်နဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ ထိုင်ပြီး ကောင်မလေးကတော့ သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ နှစ်ယောက်ခုံကို အတူတူထိုင်ကြပါတယ် ။ ကောင်လေးကိုယ်က ကောင်မလေးဘက်ကို ခြောက်ဆယ် ဒီဂရီလောက်စောင်းတွဲမှီခိုပြီး …. သူရဲ့ လက်က သူမရဲ့ ပခုံးထက်ကနေကျော်လွန်ကာ ချိုင်းအောက်ကို လျှိုဝင်ပြီး ဖက်ထားပါတယ် ။ ကားယိုင်လျှင် ကောင်မလေး စောင်းကျမသွားအောင် တွယ်ကပ်ထားသယောင်ယောင်တူပါတယ် ။(ဘာကိုင်ထားတာလဲဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်တွေပဲ အသိဆုံးပါ … ပြောရမှာတောင် ရှက်လွန်းလို ့ပါ…ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စဉ်းစားကြပါကုန် … ) ။ ခြောက်ဆယ်ဒီဂရီလောက် မှီထားတဲ့ ကောင်လေးဘက်ကို ကောင်မလေးကလည်း ခေါင်းစောင်းလို့ … ပါးချင်းကပ်နေတဲ့ မြင်ကွင်းက ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ် လူငယ်များထဲ ၊ သိပ်မရိုင်းသေးဘူးလို့ ထင်ချင်ထင်ကြမှာပါ ။ ကားလှုပ်တိုင်း ပူးချည် ၊ ခွာချည်နဲ့ အဲ့ဒီပါးနှစ်ဖက်က တစ်ချက်တစ်ချက်ဆို မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားရောက်ရောက်သွားပါတယ် ။ အပျိုကြီးမို့လို့ ကျွန်မကို ဇီဆာကြောင်တယ်ပဲပြောပြော ၊ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုး လူမြင်ကွင်းမှာဖြစ်နေတာ ၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မို့လို့ နေချင်သလို နေတယ်ဖြစ်စေဦး ၊ ဘေးလူတွေ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတာမျိုးမို့ … ကျွန်မတော့ ရှုံ့ချမိပါတယ် … ။ လူရှေ့သူရှေ့တောင် အကဲပိုနေတဲ့ နှစ်ယောက်က ကား ယိုင်တာကို အခွင့်ကောင်းယူ ပူးလိုက်ကပ်လိုက် လုပ်ရုံတင်မကပဲ … ဖရန့်ရှ်ကစ်လို့ခေါ်တဲ့ အပြုမူမျိုးတောင် …. နေ့ခင်းကြောင်တောင် ကားပေါ်မှာ လုပ်လို့ပေါ့ … ။ ကား စပယ်ယာကအစ ၊ တခြားလူတွေလည်း … ထို အပြုမူကို သတိထားမိကြမှာပါ … ။ မသိမသာ ကြည့်သူကကြည့် တည့်တည့်ကြည့်သူက ကြည့်နဲ့ …. အားလုံးက ငေးမောအံ့ဩလို့ …. ။ သူတို့နောက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်မကတော့ ရှက်လွန်းလို့ … ကြက်သီးမွှေးညှင်းထောင် ထမိတဲ့ အဖြစ်ပါ ။ အရွယ်လေးငယ်သလောက် … ဆရာကျလွန်းတဲ့ သူတို့စုံတွဲကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မ ပျို့အန်ချင်သလိုလို ၊ လည်ချောင်းတွေ ခြောက်ပြီး မျက်စိတွေ ပြာလာသလိုလိုတောင် .. မသတီတဲ့ ခံစားချက်မျိုး … ဖြစ်မိပါတယ် ။
သူများအတွဲတွေ ချစ်ကြတာကို အပြစ်မပြောပါဘူး ။ အနေအထိုင်မတတ်ပဲ အရှက်ကြောက်မဲ့နေတာကတော့ ၊ မပြောမိပေမယ့် မြင်နေရတဲ့ ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ ။ ပခုံးပုတ်ပြီး ရှက်တတ်ကြရဲ့လားလို့ မေးချင်စိတ်ကိုလည်း မနည်း မြိုသိပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ အရွယ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ပါ … မိန်းမတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာရှိပါတယ် ။ ယောကျာ်းတစ်ယောက်မှာလည်း စောင့်စည်းအပ်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှုမျိုး၊ ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ဦးနှောက်ဉာဏ်မျိုး ရှိကြမှာပါ ။ အခုလို လူမြင်ကွင်းမှာ တော်သလင်းဇာတ်ခင်းတော့မယောင် လုပ်ရပ်မျိုးတွေ ၊ ဘယ်လောက်များ များနေကြပြီလဲ ။ မိမိကိုယ်တိုင်က မရှက်တတ်လျှင်တောင် ၊ ပါ့ဘလစ်နေရာမျိုးတော့ ဆင်ခြင်သင့်တာပေါ့ ။ ဘုန်းကြီးတွေ ၊ သီလရှင်တွေ အပါဝင် တခြားသော ဘာသာက သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေလည်း ဒီလိုကားပေါ် ပါလာတတ်၊ စီးနင်းတတ်ကြတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြူမူကြောင့် အမြင်ရိုင်းသွားတယ် ၊ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ….. ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောက်ယှက်ပေးတာပဲလို့ ကျွန်မယူဆပါတယ် ။
တိရိစာ္ဆန်အချို့တောင် ရှက်ရ ကြောက်ရကောင်းမှန်း သိပေမယ့် ၊ လူသား စစ်စစ်တွေက အရှက်တရားပျောက်ပြီး အသိဉာဏ်နည်းနည်းလာတာ ၊ကမာ္ဘဦးကတည်းက ကြိမ်စာတိုက်ခဲ့လို့များလားပဲ …. ။ တွေးရင်းတောင် မဝံ့မရဲနဲ့ စိတ်တွေမွမ်းကြပ်လို့လာပါတယ် … ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဂျန်နရေးရှင်းတွေ ခေတ်များရောက်လျှင် …. ဒီထက်ဆိုးတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးများ ကြုံလာလေမလားလို့ …….. တွေရင်း တွေးရင်း …. စိတ်မောမိပါတယ် ။ကိုယ်တိုင်တောင် ဘယ်ခေတ်မှာများ ကျန်ခဲ့ပြီလဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။
စာဖတ်သူနဲ့ ရွာသူားအားလုံးလည်း မိမိရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ၊ တန်ဖိုးနဲ့ စောင့်ထိန်းအပ်ရာတွေကို အလေးထားတတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ ။
(ကလေးတွေမကြည့်သင့်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့.. ကလေးမိဘတွေက.. တရားစွဲပေါ့..။ ကင်မရာထုတ်ရိုက်.. တရားရုံးတင်ပေးလိုက်ပေါ့..)
ကိုခိုင် ကင်မရာထုတ်ရိုက်လိုက်လို့ကတော့ အဲဒီနားတင် ဒုတ်နဲ့ရိုက်သွားတာခံလိုက်ရမှာ။.
တော်ကြာလူလည်ခေါင် အခွံခွာစားနေမှ မျက်နှာဘယ်နားထားရမှန်းမသိဖြစ်နေမယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ဆိုင်ကယ်နောက်က ထိုင်ရင်းလှမ်းနမ်းတာမြင်မိရင်
အိမ်က ခွေးလေး သူ့စားခွက်ကို နုတ်သီးနဲ့လှမ်းလှမ်းထိုးတာကိုမြင်မိသဗျာ။
တော်ကြာလူလည်ခေါင် အခွံခွာစားနေမှ မျက်နှာဘယ်နားထားရမှန်းမသိဖြစ်နေမယ် ဆိုတာလေး ဖတ်မိရင်း ….. ပြုံးမိသွားပါတယ် ….. ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲကိုး ….